June 7, 2021 - समृद्ध नेपाल
इच्छा अनुसार छोरा वा छोरी जन्माउने तरिका यस्तो रहेछ भिडियो !
सन्तान जन्माउनका लागि हिन्दू धर्म दर्शनमा विभिन्न तर्कहरु उल्लेख गरिएको छ । विशेषत वेदमा छोरा वा छोरी जनमाउनका लागि गरिने विभिन्न विधि ब्रतको उपाय अपनाइएको छ । कोही सन्तान नभएर छोरा नभएर र त कोही छोरी नभएका कारण चिन्तत हुनुहुन्छ भने शास्त्रमा उल्लेख गरिएका विधि प्रभावकारी हुने आस्तिकहरुको विश्वास छ । यसका लागि हिन्दू धर्म
कोरोनाका कारण आर्थिक चपेटामा परेका चलचित्र प्राविधिकलाई रवि लामिछानेकी पत्नी निकिताले गरिन खाद्यान्न सहयोगकाठमाडौं- चलचित्र विकास बोर्डकी पूर्व अध्यक्ष तथा फिल्म निर्मात्री तथा रवि लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले आर्थिक चपेटामा रहेका चलचित्र प्राविधिकहरूलाई खाद्यान्न सहयोग गरेका छन् । बिहीवार निकिताले १८ जना प्राविधिकलाई खाद्यान्न सहयोग गरेकी हुन् । निकिताले प्राविधिकका लागि राहत दिएको चलचित्र प्राविधिक
नेहा कक्कडलाई बलिउडकी चर्चित र कुशल गायिकाको रुपमा चिनिन्छ । अहिलेको समयमा गायका नेहा कक्कडसँग कुनै चिजको कमी छैन । ३३ वर्षीया गायिका नेहालाई उनकी आमाले जन्म दिन चाहदैन थिइन् ।टोनी कक्कडको खुलासा गीतकार तथा गायक टोनी कक्कडले केही समय अगाडि मात्रै सुरुवाती दिनमा आफ्नो परिवारको आर्थिक स्थिति निकै कमजोर रहेको बताएका थिए । आर्थिक
निरुताको सिंहले सेयर गरिन,चलचित्र ‘आफन्त’का श्रीकृष्ण र शिव रेग्मी सँगको सुटिङका पूराना तस्विरहरुसन् १९९९ को चर्चित फिल्म थियो आफन्त । चलचित्रका निर्देशक शिव रेग्मी थिए भने अभिनेता अभिनेत्रीमा त्याे बेलाका हिट जोडी निरुता सिंह र श्रीकृष्ण श्रेष्ठ थिए । केशव भट्टराईले निर्माण गरेको यो फिल्मले बक्सअफिसमा सुपरहिट प्रदर्शन गरेकाे थियाे । २२ वर्षपछि पनि यो
आँचलले कसलाई हाल्ने भइन् मु#द्दा? प्रमाण सहित उजुरी दिन प्रहरी कार्यालय पुगेपछि !
आँचलले कसलाई हाल्ने भइन् मु#द्दा? प्रमाण सहित उजुरी दिन प्रहरी कार्यालय पुगेपछि.पछिल्लो समय सबैभन्दा धेरै सामाजिक सञ्जालको प्रहार खेप्ने नायीका हुन् आँचल शर्मा । उन’ले डाक्टर उदिप श्रेष्ठसंग विवाह गरेपछि उनका बारेमा अनेक प्रशंग जोडेर समाचार बनाइए । कला’कारको ब्यक्तिगत जिवन सर्वसा’धारणका लागि रोचक लाग्छन् । उनीहरु आफ्नो मनपरेका कलाकारका ब्यक्तिगत जिवनका बारेमा जान्न चाहन्छन्
रकारले भाटभटेनीका सञ्चालकको घर पत्ता नलाएपछि सार्वजनिक गर्यो यस्तो सूचनाकाठमाडौ । बालुवाटारस्थित ललितानिवास क्याम्पभित्रको २९९ रोपनी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा प्रकरणका अभियुक्त ४९ जनाको घर ठेगाना पत्ता नलागेको भन्दै भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले २१ दिने सूचना जारी गरेको छ। आइतवार जारी गरिएको सूचनामा ४९ जनाको घर ठेगाना पत्ता नलागेको उल्लेख छ । तरअचम्मको कुरा त